काठमाडौं – देशकै शीर्ष डिभिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग ३ मंसिरबाट सुरू हुँदै छ । कुल १४ टोलीको सहभागीता रहने फुटबल लिग नजिकिँदै गर्दा सम्पूर्ण टोलीहरू तयारीमा व्यस्त छन् भने कति क्लबलाई अझै पनि खेलाडी अनुबन्धनमा भ्याइनभ्याइ छ ।
२८ वर्षपछि नेपाललाई पहिलो पटक क्षेत्रीय प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनपसिपमा फाइनलमा पुर्‍याएका कप्तान किरण ३ मंसिरबाट सुरू हुने लिगमा कुन क्लबमा आवद्ध हुँदै छन् ? लिग खेल्ने या नखेल्ने के योजना बनाएका छन् ? ‘ट्रान्सपर मार्केट’ मा मूल्यवृद्धिका कारण अन्य क्लबले वास्ता नगर्नुलगायत समसामयिक विषयमा नेपाली टोलीका कप्तान किरण कुमार लिम्बू (चेम्जोङ)सँग गरिएको कुराकानी